I-15 YEYONA MITHAMBO ILUNGILEYO YOKULAHLA I-BELLY FAT -UYITSHISA NJANI I-BELLY FAT NGOKUKHAWULEZA - UKUSEBENZA
I-15 yeyona mithambo ilungileyo yokutshisa i-Belly Fat, ngokutsho kwabaqeqeshi bakho
Eyona / Ukusebenza
Xa abantu abaninzi becinga ngokunciphisa umzimba, enye yezinto zokuqala eziza engqondweni kukufumana isisu esineetoni ngokupheleleyo. Emva kwayo yonke loo nto, ngubani ayenzi Ngaba ufuna ukubanakho ukutyibilika kwibhanti yejee ngaphandle kokujongana nomphezulu we-muffin? Kwaye, ukuphulukana isisu esityebileyo yindlela eqinisekileyo yomlilo yokuphucula impilo yakho: Uphando unxibelelanisa ubungakanani besinqe obukhulu ukuya isifo sentliziyo , isifo seswekile, kunye neminye imihlaza. Oko kwathethi, sikuthiyile ukwaphula kuwe, kodwa ukwenza amakhulukhulu e-crunches yonke imihla akuyona eyona ndlela yokulahla amanqatha esisu. Ngapha koko, umthambo okhuthaza ukunciphisa indawo awukho kwaphela.
Ukuncitshiswa kwamabala ayisiyondlela efanelekileyo yokulahlekelwa ngamanqatha esisu, 'ucacisa umqeqeshi womzimba kunye nengcali yesondlo Corey Phelps , umdali we Ukuphuhlisa ngeCorey Fitness Programme . Kodwa kukho izivivinyo ezikhulu ezijolise kumbindi eziza kutsha amanqatha kuwo wonke umzimba, zikhokelele kwisiseko esomeleleyo ngakumbi.
ZIQHELEKILEYO: Joyina Uthintelo lweNkulumbuso ukufikelela ngokungenamda kwi-Prevention.com, kubandakanya ukusebenza ekhaya.
Umqeqeshi wodumo kunye nengcali yesondlo UJillian Michaels ikwatsho ukuba ukwenza imithambo eyahlukeneyo edibanisa i-cardio, amandla, kunye nomsebenzi ophambili ekugqibeleni kuya kukunceda ukunciphisa amanqatha omzimba. Ndingumntu othanda umthambo ojolise ikakhulu, kodwa sebenza amaqela emisipha ngaxeshanye kunye ne-HIIT yecandelo lokutsha kweekhalori, utshilo.
Nantsi eyona mithambo ilungileyo kunye nokuzilolonga ukuze ulahlekelwe ngamanqatha esisu, ngokutsho kwabaqeqeshi bakho. Ngaba ufuna ukukhuthazwa ngakumbi kokuzilolonga? Thatha i Tone phezulu kwi-15 Ukuzilolonga iDVD, ezaliswe yimizuzu eyi-15 yokusebenza komzimba onokuyenza ekhaya.
Ukujolisa kunye nokuthambisa isisu sakho ngokunyakaza okuncinci, okuthambileyo okunokuzisa iziphumo ezinkulu. Olu hlobo lwefuthe lokuzilolonga lunceda ukomeleza amandla akho, ibhalansi kunye nokuhamba.
akhangeleka njani amaqanda amakhalane
Iindlebe zihlaba uphawu lwe-covid
Inani leengelosi ezili-1010
Iicicadas ziya kuhlala ixesha elingakanani ngo-2021
Inani leengelosi ezili-1111
kuthetha ntoni ukubona i-111